ओलीले सुन्ने गरी चिच्याएर भन्न चाहन्छु, संसद विघटन गर्न अधिकार कस्ले दियो ? : भीम रावल – Koshidaily
ओलीले सुन्ने गरी चिच्याएर भन्न चाहन्छु, संसद विघटन गर्न अधिकार कस्ले दियो ? : भीम रावल
access_alarms Koshi daily १२ पुष २०७७, आईतवार ०१:५९	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं, ११ पुष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका नेता। भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संगीन आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले ओली प्रतिज्ञा र अठोटमा टिक्न नसक्ने व्यक्ति भएको दावी गर्दै ओलीको गलत कदम सच्याएर न्यायालयले न्याय दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता रावलले नेकपाको सात दशक लामो ईतिहासमा अहिले जे घट्ना भैरहेको छ यो अत्यन्तै दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका फूटका श्रृंखलाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उँचो पारेर अघि बढ्छौं भनेर स्वयम ओली र प्रचण्डले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । तर, ओली त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नुभएन् ।’
रावलले ओलीमाथि दर्जनौ आरोप लगाउँदै कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न कार्य पनि आफुहरुको दबाब पछि भएको दावी गर्नु भएको छ । उहाँले ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा लगभग निश्चित् हुँदा हुँदै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर गलत काम र कदम चालेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
ओलीमाथि आरोपको चाङ लगाउँदै अगाडि भन्नुभयो, ‘सोल्टीमा विदेशी महिलाले आयोजना गरेको होली वाईन कार्यक्रममा सोल्टी होटलमा चार/चार दिन बस्नुभयो । यो पनि आपत्तिजनक थियो । हामीले विरोध गर्यौं । भारतीय चलचित्रकर्मीलाई डेढ अर्ब खर्च गरेर सम्मान गर्ने निर्णय गर्नुभयो, हामीले विरोध गरेपछि रोकियो ।
भारतबाट आयात गरिने तरकारी परीक्षण गरेरमात्रै भित्र्याउने भन्यौं, पछि उहाँले राष्ट्रकासामू माफी माग्नुभयो । ओलीजीले आजकाल के भन्नुहुन्छ भने–मलाई काम गर्न दिइएन भन्नुभयो । हो, हामीले देश हितमा नभएका काम नगर्न भन्यौं ।
जस्तो, विम्स्टेक सम्मेलनमा उहाँले संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुनेमा गर्ने सहमति गर्नुभयो । तर, हामीले आपत्ति जनायौं । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आपत्ति जनायो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेको छ ।
भारतले राजनीतिक नक्सामा समेत त्यो भू–भाग समावेश गर्यो । हामीले आवाज उठायौं । हामीले नक्सा प्रकाशनको लागि दबाब दियौं । तर, उहाँले सुन्नुभएन । जब भारतीय रक्षामन्त्रीले जब सडक खुलाउनुभयो, तब उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्छु भनेर भन्न बाध्य हुनुभयो ।
उहाँले संसदमा भाषण गरेको स्मरण गर्छु कि नक्सा किन प्रकाशन गर्ने ? बरु भूमि ल्याउने हो नि भनेर भन्नुभयो । तर, आजकाल नक्सा प्रकाशन गरेकोले हटाउन खोजियो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले तथ्यहीन कुरा गर्न सुहाउँछ ?’
नेता रावलले अगाडिद थप्नुभयो, ‘नेपालको पाठ्यक्रममा पनि नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न अवरोध भयो, रातारात त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनुभयो । पुस्तिकामा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो ? उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्न चाहनुभएको थिएन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने भयो भनेर संसद विघटन गर्ने काम भयो । कतै यो षड्यन्त्रको अंग त होइन ? भनेर अहिले आशंका गरिएको छ ।
भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति १२ बजे बोलाएर के–के साउती गर्नुभयो ? यो लज्जाको विषय हो । परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो । के–क नै काम गर्यो भनियो, सम्बन्ध उचाईमा पुग्यो भनेर ।
अमेरिकाको होम ल्याण्ड सेक्युरिटी छ, त्यसलाई नेपाल भित्र्याउनेगरि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो । पार्टनरसीप एग्रिमेन्टको कागजपत्र पेश गर्न संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले उहाँलाई पत्राचार गर्यो, समिति सभापतिले पटक पटक कागजजात पेश गर्न भनियो, अहिलेसम्म पेश भएन् ।’
रावलले आफू वरिपरिका बस्नेहरुले काम गर्न दिईएन भन्नुपनि गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘हामीले के काम गर्न दिएनौं ? रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ । फलामहरु आज चोरी हुँदैछ । त्यही पनि हामीले रोकेनौं । जहाज चलाउँछौं भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं ।
रातारात झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं । निजगढ, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल हामीले बनाऔं भनेकै छौं । तर, हामीले जनघाती कामको भने विरोध गरेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुन धारामा संसद विघटनको अधिकार दिईएको छ रु भन्दै रावलले प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘उहाँले संविधानको धारा ७६ अनुसार विघटन गरें भन्नुभएको छ । तर, संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन् ।
म ओलीले सुन्नेगरि भन्न चाहन्छु । कि उहाँ पनि देशभरिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन् । एउटा जिल्लाबाट मात्रै जितेको हो । उहाँ पदको लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो घट्नाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
उहाँले यसरी जनमतविरोधी काम गर्नुहोला भनेर कल्पना गरिएको थिएन् । संविधानबमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन् । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा, संविधानको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुन्न भन्ने उहाँपनि हो ।
तर, आज त्यही काम उहाँले गर्नुभयो । उहाँबाट संविधान र कानून पालना होला त ? संविधानसभाका अध्यक्षसमेत भएका व्यक्ति, संविधान बनाउन सक्रिय व्यक्तिहरुको अभिलेख हेर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँहरुले हिजो के के भन्नुभएको थियो ? झुठ र ढाँट बोल्ने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कानूनले के गर्ला र ?’